सपनामा विहे गरेको देख्नु भयो, दिन्छ यस्तो संकेत जान्नुहोस्
Homeसमाचारसपनामा विहे गरेको देख्नु भयो, दिन्छ यस्तो संकेत जान्नुहोस्
January 29, 2021 admin समाचार 7708
सपनामा देखिएका कतिपय घटनाले तपाईको आगामी दिनको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने धार्मिक विश्वास रहेको छ । सपनामा देखिएका कतिपय कुरालाई ध्यान दिन सकियो भने भविष्यमा आइपर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भने आगामी दिनमा जीवनमा के हुँदैछ भन्ने जानकारी पाउन सकिने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
सपनामा देखिने कतिपय जीव जनावर, वस्तु, सामाग्रीले के अर्थ दिन्छन् त ?
गाई: पितृ दोष तथा दु:ख कष्ट आइपर्ने।
दियो: दियो दान दिएको देखेमा घरवार नाश हुन्छ।
देवता: देवता रिसाएको देखे धर्मको हानी हुन्छ।
जमिन: जमिन हल्लिएको सपनामा देखे सरकारी मुद्दा लागेर जेल जानुपर्ने हुन्छ।
दुध : दुध खाएको देखे शोक पर्छ। आपत पर्छ।
पानी: पानी परिरहेको सपना देखे विरामी हुने संकेत हो।
ढोका: ढोकामा आगो लागेको देखे घर वर्वाद, विरामी र धन नाश हुन्छ।
कपास: कपासकोबोट देखे रोगको डर हुन्छ।
माकुरा: माकुराले टोकेको सपना देखे रोग लग्न सक्छ।
भिक्षा: सपनामा भिक्षा लिएको-दिएको दुवै अशुभ हुन्छ। गरीबीले सताउन सक्छ।
धुँवा: धन नाश, व्यपारमा हानी, मानसिक सन्ताप र प्रियजन विछोड हुन्छ।
वर्षा: घनाघोर वर्षा देखे गृह कलह र मित्र विछोड हुने संकेत हो।
बिरालो: सपनामा बिरालो देखिए शत्रु बढ्छ।
हिलो: हिलोमा फसेको देखे कष्ट र अपव्यय हुन्छ।
तारा: तारा खसेको देखे विपत्ती आइलाग्ने सन्केत हो।
फलामे वस्तु: सपनामा फलामका भाँडा वा वस्तुहरु देखिनु अशुभ हुन्छ। विपत्ती आउने सन्केत हो।
फूल: रातो फूल देखे कष्ट हुन्छ।
विवाह: वैवाहिक उत्सव देखिनु अशुभ मानिन्छ।
घर: घर लडेको देखे गृहस्थी जीवन तहसनहस हुन्छ.
दाँत: दाँत झरेको वा भाँचिएको सपना देखे दुख र झन्झट आइलाग्छ।
भोक: आफु भोको भएको देखे विपत्ति आउँछ।
आँखा: आँखा फुटेको देखे परिवारमा नोक्सानी हुने सम्भावना हुन्छ।
कपाल: कपाल देख्नु अशुभ हुन्छ। युद्ध, मुद्दा मामिलामा पराजय हुन्छ। कपाल झरेको देखे ॠण पनि लग्न सक्छ।
आकश: रातो रङ्गको आकाश देखे कष्ट, दु:ख, भय उत्पन्न हुन्छ।
आकाश: आकाशमा आँधी, तुफान, धुलो देखिए देशमा लडाई वा प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ। आकाशबाट झरेको देखिए सामाजिक आपमान हुने वा समाजबाट आपहेलना वा निष्काशित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्धकार: अन्धकार वा अँध्यारो गुफा देखे रोग लाग्ने डर हुन्छ।
चिता: दन्किएको चिता देख्नु अशुभ मानिन्छ। – खबरहबबाट
पेट्रोलको भाउ घटेर आयो, भारतले पठायो नयाँ मूल्य सूची
April 1, 2022 admin समाचार 1377
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले नेपाल आयल निगम`लाई पेट्रो`लियम पदार्थको नयाँ मूल्य`सूची पठाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार शुक्र`बार पठाएको नयाँ मूल्य सूची`अनुसार लगातार बढि`रहेको पेट्रोलको मूल्यमा सामान्य घ`टेको छ। नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलको मूल्य
May 4, 2021 admin समाचार 5381
विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी मा’इक्रोसफ्टका मालिक तथा विश्वकै धनि व्यक्ति मध्येका एक हुन् बिल गेट्स । उनको ब्या’पारको बारेमा त हामीले थुपै खबरहरु सुन्दै आइरहेका छौं । तर, आज हामी उनको निजी जीवनको बारे’मा चर्चा गर्दैछौं
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ? हेर्नुहोस्
June 13, 2021 admin समाचार 4817
आइतबार नेपाली बजारमा सुन’को मूल्य एके दिन अधिकतम ६०० रुपैयाँले घट्न पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महा’संघका अनुसार आइतबार सुन प्रति’तोला ६०० रुपैयाँले घट्दै ९३ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, आज